Izahay dia mamakafaka ny sisin'ny Samsung Galaxy S6 | Androidsis
Samsung Galaxy S6 sisiny, ny telefaona Samsung izay tena hitondra ny toetra tsara sy tombontsoa fa ilay mpanamboatra Koreana tsitoha dia nanolotra anay tamin'ny taona voalohany tamin'ny Android, ary tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay dia nijanona tamina fanontana teo aloha tamin'ity andiany S ity izay tavela tao anaty rano borage.
Efa eo am-pelatanantsika izy io ary Manolo-tena handinika sy hamindra ny fahatsapan'ilay heverina fa afaka miverina amin'ilay Samsung isika, na dia mitohy ho iray amin'ireo mpanamboatra matanjaka indrindra amin'izao fotoana izao aza izy io. Ary manantena izahay fa hamaly faty an'io plastika io ny Galaxy S6 ary ny fahatsapana fa fotoana fohy taorian'ny nahatratrarany ny tanjona ary nolalovany ho mpandresy. Finday iray izay miaro ny vera ao an-damosina ary miavaka amin'ny efijery miolaka, amin'ity kinova farany ity, ary amin'ny fakantsary manome antsika ny fahatsapana tsara indrindra ho an'ny sary. Lavorary daholo hatreto, fa misy lesoka ve sa misy omena tsiny? Eny, mazava ho azy.
1 Famaranana ny tena izy
2.1 Efijery mirandrana
2.4 Endri-javatra Edge
2.5 Ny pitsopitsony kely
6 Ohatra fakan-tsary
6.3 Fifantohana voafantina
6.4 Sary Macro
6.6 Toetran'ny hazavana ambany
7 Ohatra fandraketana horonantsary
7.1 Lahatsary horonantsary 1080p 60FPS
Famaranana ny tena izy
Miaraka amin'ity fakantsary mahatalanjona ity izay saika mamela antsika hanana ny fahatsapana manana fitaovana tsara ahafahana maka sary ny zavatra manodidina antsika rehetra, lasa saika tonga lafatra daholo ny zava-drehetra ary ny tsiky dia soritra eo amin'ny tarehintsika rehefa ananantsika am-pifaliana ity fitaovana ity eny an-tanantsika. Avia, saika tsy misy na inona na inona sisa asehontsika azy ny doorman hanehoana azy ny kalitaon'ny selfies na ny fomba ahafahany maka sary am-polony ao anaty jiffy.
Tsiky daholo ny rehetra ary mifaly avokoa ny rehetra mandra-pahatongan'ny fampiasana ny fakantsary mandritra ny adiny iray hisamborana ny tontolo manodidina antsika, Izahay dia mijery ny isan-jaton'ny bateria ary mahazo ny diso fanantenana voalohany, ary io dia, araka ny efa fantatrao, ny Galaxy S6 vaovao dia mijaly amin'ity lafiny ity.
Ary mijaly satria hampiasa betsaka ny fakantsaranao izahay. Ho sisa tavela isika hampiasa tsara ny sisin-dàlana hahalalana amin'ny zava-misy ny vaovao sy ny toetr'andro amin'ny alàlan'ity efijery miolaka ity, saingy amin'ny farany dia tsy maintsy ariana isika satria io vola lany amin'ny bateria io dia azo antoka fa aleontsika kokoa ka mahatratra antsika ankehitriny sy makà sary bebe kokoa.
Raha mijery ny antsipirian'ny bateria isika dia manoloana ny finday avo lenta finday mahafinaritra izay manome lanja toetra tsara maro ary azo antoka fa fitaovana Android tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Hitan'i Samsung ny lakile amin'ny famolavolana ary ny ambiny tonga ho azy.
Nanan-danja lehibe tamin'ny Samsung ity taona ity satria ity Galaxy S6 vaovao ity dia tokony hidika hoe a mialoha sy aorian'ilay andiany S taorinan'ny taona vitsivitsy nandehanany ny fandikana ny S3 nefa tsy nitondra vaovao lehibe akory.
Izany dia nanompo tamin'ny nahazo tsikera marobe avy amin'ny lafiny rehetraNa ny vondrom-piarahamonina Android mangetaheta hahita Samsung avo lenta izay nisy indray ny Galaxy S2, ary ny fampahalalam-baovao, reraky ny miandry fiovana lehibe amin'ny famolavolana satria eny toa ity tamin'ity taona ity.
Farany afaka miteny izany isika miatrika Galaxy S6 tsy mitovy amin'ny fanontana teo aloha isika ary rehefa eo am-pelatanantsika azy io dia esorintsika ireo fahatsapana plastika nomeny antsika tamin'ny fotoana farany ny Galaxy S5 taona lasa.
Zavatra iray tsy hitantsika ary ilay fahatsapana manana fiakarana ambony volavola premium misy an'io vera ao aoriana io sy ny efijery sisiny, amin'ity tranga ity, izay mitondra antsika amin'ny smartphone manokana.
Raha manampy an'ity isika ilay fakantsary mamela antsika hahafaly ny maka sary izay rehetra mandalo eo alohanay, ary ilay efijery miolaka natolotr'i Galaxy S6 antsika amin'ny kinova farany, tsy afaka manao afa-tsy ny miarahaba an'i Samsung isika. Mety ho tara izy ireo no tonga tamin'ny fanontana telo izay tsy nifanaraka tamin'ny lazan'ny marika sy ny dikan'izany ho an'ny Android, satria manana trosa betsaka amin'ity mpanamboatra ity isika.
Ny antsipirian'ny fananana smartphone miaraka Ny fampandrenesana an-tsisiny sy ny fiasa sasany dia manampy ny fahatapahana ho telefaona mahafinaritra azontsika atao ny manome tsiny ny batterie hahafahantsika mamoaka ny loko amin'ny Samsung sy ny vidiny lafo.
Ny efijery miolaka amin'ny kinova sisin-dàlana dia mendrika hotononina amin'ny fananana azy amin'ny lafiny roa amin'ny terminal, izay manavaka azy amin'ny telefaona hafa mihoatra ny ampy afa-tsy ny an'ny tsindry farany an'ny Galaxy Note 4.
Ny lafy iray dia ny mety tsy mahazatra antsika tazomy somary malama ny telefaona iray amin'ny telefaona rehefa miditra ao anaty vera ianao ny efijery miolaka. Noho ny endrika mahitsizoro an'ireo terminal hafa dia mety mila andro vitsivitsy ianao vao zatra an'io efijery miolaka io.
Ny zavatra tokana dia toa tsara izany rehefa eo am-pelatanantsika ny telefaona ary io no hanintonana ny saina indrindra amin'ny mason'ny namana na ny olona akaiky azy.
Ny vera ao ambadika dia midika hoe, izay Eny, adinontsika ilay plastika na ilay hoditra any aoriana izay toa hitsoaka avy amin'ny tananay amin'ny fotoana iray. Ankoatry ny fiovana mahery vaika amin'ity lafiny ity izay manome azy fanatrehany hafa sy dikany hafa miaraka amin'ny antsipiriany marobe izay mitarika famaranana lehibe avy amin'ny zoro rehetra jerenao azy.
Ny dikan'ny fananana smartphone iray izay mandany ny volanao fa manangona haingana ny valiny izy amin'ny alàlan'ny fahatsapana sy fieritreretana fa talohan'ny finday avo lenta. Ity endriny ity koa dia hita eo aloha ary rehefa mijery ireo lafiny miolikolika isika, ny terminal dia ny mampiavaka azy amin'ny hafa irery.
eny eny iray amin'ireo faniriana lalina rehefa handeha hividy ny Galaxy S6 ianao dia ny ivon'ny sain'ny olona, ho tanteraka haingana izy io. Ity dia iray hafa amin'ny antsipiriany ary manana izany ny vidiny lafo.
Ary tonga izahay amin'ny anjaran'ity Galaxy S6 ity. Azontsika atao ny milaza toy izany amin'ny efijery na amin'ny endrika, fa mahafinaritra kosa ny fakantsary. Io no iray amin'ireo terminal izay manaraka ny fironana natomboka avy amin'ny Note 4 ho an'ny finday avo lenta izay mitovy amin'ny iPhone amin'izao fotoana izao ary izay maka sary manana kalitao lehibe.
Na eo ambany tarehin-javatra ambany, amin'ny alina na amin'ny sary makro, ny fakantsary an'ny Galaxy S6 dia mahavariana fotsiny. Andao, ao anatin'ny goa akoho latsaka noho ny akoho akoho dia nandany ora tsara naka sary isan-karazany nameno ny fahatsiarovana anaty amina fakana sary marobe.
Ny horonan-tsary dia manolotra fihetseham-po mitovy amin'izany Ary raha efa miditra amina fampiharana toa ilay natombok'i Microsoft miaraka amin'ny Hyperlaps isika dia mahavariana ny vokany.
Miaraka amin'ny sisin'ny efijery ananantsika fidirana amina endri-javatra maromaro hanamboarana ny fitaovana mba hanazava rehefa misy antso na fampandrenesana voaray, zahao ireo fampandrenesana tsy azonao avy amin'ny fifandraisana manan-danja, jereo ireo loharano mifandraika amin'ny zavatra mahaliana anao, na asehoy famantaranandro raha tsy eo ny efijery an-trano
Endri-javatra sasany sisin'ny izay mety ho mora ampiasaina mandritra ny fotoana vitsivitsy ary manome azy "somary" milay ihany rehefa mianatra mampiasa azy ireo isika, hatramin'ny voalohany dia very kely isika. Ny zavatra hitako fa tena ilaina dia ny fidirana haingana amin'ireo fifandraisana manan-danja amin'ny alàlan'ny famindrana avy eo ankavanana ambony.
Fampisehoana an-tsisiny izay azo antoka handoa vola bebe kokoa izahay hampiasana azy raha toa ka betsaka kokoa ny fahafahan'ny bateria, satria manome ny fiheverana fa lanintsika ho tombontsoan'ny zavatra efa ananantsika ao amin'ny bara fampandrenesana izany.
Ny pitsopitsony kely
Mbola manana isika S Fahasalamana ho fitaovana amin'ny fahasalamana izany dia mbola eo manome ny zava-drehetra, avy eo ny sensor sensor momba ny rantsan-tànana ilaina amin'ny fitaovana amin'ity karazana ity sy ny tsy ampoizina manana Microsoft eny ambony sambo miaraka amina fampiharana isan-karazany toy ny OneNote.
Ny iray amin'ireo antsipiriany kely ireo izay mety ho mora ampiasaina dia esory ireo fampiharana izay tonga tampoka amin'ny rafitra.
Ny fahombiazana dia mitoetra hatrany amin'ny ankamaroan'ny entana avo lenta amin'ny telefaona. Fandraisana iray izay mihetsika tsara ary ho anao izay efa zatra Samsung dia ho fantatrao sahady izay toetran'i Touchwiz.
Fampisehoana azo antoka hihatsara hatrany amin'ny ambaratonga avo be raha toa ka manana ny kinova Android Lollipop, fa ny fahamarinana dia mahagaga tsy ampoizina ary betsaka. Ka ny fahatsapana dia mitoetra fa S6 miaraka aminy Android Lollipop madio.
Tsy izany no ilazako fa tsy mandeha amin'ny laoniny i Touchwiz na mitsikera azy, fa noho ny fahombiazan'ny Galaxy S6 miaraka amin'ireo RAM 3 GB sy puce octa-core, manana izany faniriana te-hanandrana an'i Lollipop izany ianao miaraka amin'ity fitaovana ity miaraka amina endri-javatra lehibe toy izany.
Ary tonga tamin'ny ratra nahazo ny trauma tamin'ny Galaxy S6 izahay. Andao hojerena, Eny, mifanaraka amin'izay hita amin'ny telefaona hafa izany, Fa inona no mitranga? Izahay dia miaraka amin'ny smartphone izay hampiasainay betsaka. Amin'ny fakan-tsary tsotra izao, fotoana mety, 40 minitra eo ho eo ary hisotro 30-40% ny bateria.
Lojika raha mandeha miaraka amin'ny namana amin'ny fety na lasy isika, amin'ny fotoana hampiasantsika ny fakantsary, WhatsApp, ny tambajotra sosialy ary ny lalao video hafahafa, tampoka hanana ny fahatsapana isika fa tsy manana bateria ary mipetraka amintsika ny fanontaniana momba ny antony tsy nampifandraisin'izy ireo ny iray manana fahaiza-manao lehibe kokoa. Ary eo no somary mipoitra ny fahatezerana sy ny hakamoana. Izy ireo dia € 849 amin'ny smartphone Samsung.
Ok, handray tsy ho ela isika ny dikanteny miampyfa ho an'ireo izay nandany izany vola izany ary tsy afaka nanakalo ny bateria akory dia mahasosotra.
Izahay dia manana eo am-pelatananay ny ankamaroan'ny fampiasa izay ananan'ny S5 ihany Mode HDR, makro, fifantohana mifantina, panorama ary karazana kalitao rehetra mba hanaitra ny fotoana tsara indrindra amin'ity fahavaratra ity amin'ny alàlan'ny fakantsary fakantsary an'ny Galaxy S6.
Una Fakan-tsary 16 MP ao aoriana izay maka sary amin'ny vahaolana 2988 x 5312, fanamafisana ny sary optique, autofocus, auto HDR, panorama, ny fahitana ny tarehy ary ny fifantohana amin'ny tanana. Ao amin'ny fandraketana horonantsary dia mirakitra feo amin'ny 60FPS amin'ny 1080p izy io, izay, araka ny hitanao amin'ny ohatra fakan-tsary, dia manome kalitao ambony. Aza adino ny momba ny vahaolana 2160p amin'ny 30FPS, 720p amin'ny 120FPS, HDR na horonan-tsary roa.
Ny eo aloha dia iray hafa amin'ireo hatsarany kely misy MP 5 sy kalitao tsara haka ny selfies tsara indrindra. Izy io dia mirakitra ny 1440p 30FPS ary manana HDR mandeha ho azy. Asongadino ny maody fa mandeha ho azy izy hanatsarana ny sary manala ny ketrona sy ny hafa, na dia mety hijanona kely aza ny fahatsapana sary misy tarehy plastika raha ampiasaintsika amin'ny farany ambony io fomba io.
ny ny sary etsy ambany dia nahena ho 1200 × 675 miaraka amin'ny lanjan'ny 396KB. Tonga any amin'ny 6 MB ny tena izy ary manana vahaolana 5312 × 2988. Fampihenana izay tsy midika akory fa tsy azo hamarinina ny kalitaon'ny fakantsary fakantsary Galaxy S6.
Toetran'ny hazavana ambany
Ohatra fandraketana horonantsary
Lahatsary horonantsary 1080p 60FPS
Na lalao video na atiny multimedia, miatrika ny iray amin'ireo fitaovana na fitaovana tsara indrindra hampiasana ity karazana haino aman-jery ity izahay. Ny efijery lehibe sy ny feony mahafinaritra dia fangaro mipoaka izay tsy hamela anao tsy hiraharaha. Raha efa milalao ny Hearthstone lehibe ianao dia ho tsapanao ny dikan'ny filalaovana amin'ny Galaxy S6.
Mahagaga fotsiny ary inona mamela anao hanararaotra ny fitaovany mba hankafizanao lalao marobe izay mangataka hatrany ny loharanom-bola bebe kokoa, noho izany dia ho rakotra anao mandritra ny taona vitsivitsy ianao.
Ny Galaxy S6 dia voatsikera noho ny tsy fahafahany manova ny bateria ary tsy manana karatra micro SD. Ny roa amin'ireo hatsaran-toetra lehibe nananany tamin'ny fanontana teo aloha ary nanapa-kevitra ny hanafoana ny farany i Samsung. Miaraka amin'ireo kinova samihafa ao amin'ny 32/64 GB ireo, ny tena izy dia hanana fahatsiarovana anaty ampy hipetrahana mandritra ny fotoana maharitra ny karazana atiny multimedia rehetra isika, saingy mazava ho azy, ireo izay efa zatra nanampy ny fahatsiarovana microSD dia azo antoka ario izy. diso.
Betsaka ny zavatra tsara azo lazaina momba ny Galaxy S6. Ny fakan-tsariny lehibe, ny fitaratra misy azy, ny bezela vita farany avo lenta, ny efijery misy ny vahaolana QuadHD, ny feony mahavariana na ny interface iray izay mihetsika tanteraka ary mbola manome ady be amin'i Touchwiz, saingy ny zavatra ialalako dia ireo fanahiana izay tsy maintsy naterak'i Samsung Galaxy S farany izay hanome fahatsapana hafa rehefa teo am-pelatananao izany, ary andao handeha. efa nahomby izy.
Ireo fahatsapana ireo dia manan-danja tokoa, nanomboka izany habetsahan'ny kalitao kely rehetra izany, amin'ny farany dia mitarika anao hahatsapa sy hieritreritra fa manana telefaona tsara ianao. Ny valiny farany dia ny hoe, Samsung dia nanao dingana tsara tamin'io fialana tamin'ireo andiany teo aloha an'ny Galaxy S izay mirona kokoa amin'ny plastika, zavatra iray izay nifanaraka tamin'ny fahatsapana fa niatrika ilay telefaona avo lenta izay izahay Sandany sy tongotra no vidiny.
NA ity kinova farany ity miaraka amin'ireo 849 € ao amin'ny 32GB dia hamerina indray ary na dia betsaka aza ny miverina dia mbola tokony hieritreritra. Indrindra ho an'ireo mavesatra mavesatra izay tsy manome kalitao avo indrindra amin'ny singa rehetra ananan'ny Galaxy S6 sisiny, fa ho an'ny traikefa Android avo lenta dia manompo be dia be izy ireo.
Mba hamaranana, telefaona tsara antenaiko fa ny loha lohan'ny smartphone Samsung tsara kokoa.
Samsung Galaxy S6 sisiny
Ny fakantsariny lehibe
Fampisehoana avo lenta amin'ny lafiny rehetra
Ny efijery sisiny dia mampiavaka azy saika miavaka
Drafitra hafa ihany amin'ny farany
Ny vidiny lafo
Tsy manana bateria hankafizany azy tanteraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Famakafakana ny sisin'ny Samsung Galaxy S6, smartphone an'ny fanovana ho an'ny mpamokatra Koreana
T_T tadiaviko 🙁
Roa isika: =)
Misaotra Toni! Ny marina dia tsy tiako ny manao analizy haingana. Tiako ny hanana azy io isan'andro raha mbola vitako, na dia maharitra ela kokoa aza ny fandefasana azy any aoriana, fa amin'ity fomba ity dia raisinao ireo fahatsapana omen'ny telefaona anao, izay amin'ny farany no manisa.
Ilay 5.1.1 Tsy nanana fotoana hijerena an'io aho ary avy amin'izay nolazainao ahy fa ratsy kokoa noho izy io. Ahoana raha tavela tamin'ny faniriako hanandrana izany fitaovana S6 izany aho izay mahafinaritra amin'ny Android Lollipop madio!
Samsung dia manapoka ny kinova 128GB an'ny Galaxy S6 sy S6 Edge